သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုးကို စင်ပေါ်မှာ 1 By 1ထိုးဖို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသား Hu Go – Cele Top Stars
May 25, 2021 By admin2News
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အား လက်ဝှေ့စင်ပေါ်မှာစိန်ခေါ်ထိုးချင်ပါကြောင်း မော်ဒယ်HuGo ကသူ့ရဲ့Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။ သူရေးသားထားတာက…”ကျနော်တစ်နှစ်တစ်ခါ ဝါသနာတူညီကိုတွေနဲ့စဉ်ပေါ်စိန်ခေါ်ပီးကစားပါတယ်…။
ဒီနှစ်က စပြီး အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့် မထိုးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့လည်း အသစ်ပေါ်လာသောမိုက်ကြီး ဦးမင်းအုပ်စိုး ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီကနေစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား!
။MMA Rule နဲ့စိန်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးWeight နဲ့အသက်အရွယ်အရ သရေအရှုံး အကြောပေးပါတယ်။ကျနော်ကတော့ ကျနော့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာပဲ 1 By 1 လူမိုက်လုပ်တယ်။ခင်ဗျားက လူမိုက်ဆိုတော့ ကစားချင်လို့ပါ။အကယ်လို့လူကြီးမင်းဘက်က လက်ခံရင်
BSB (Burmes Street Boxing) ကို စာရင်းပေးသွင်းပြီးလာမဲ့ BSB Batch3မှာကျနော်နဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ!။အားကစားစိတ်ဓာတ်ဖြင့်”လို့ရေးသားထားပါတယ်…။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးအုပျစိုး အား လကျဝှစေ့ငျပျေါမှာစိနျချေါထိုးခငျြပါကွောငျး မျောဒယျHuGo ကသူ့ရဲ့Facebook မှာရေးသားထားပါတယျ။ သူရေးသားထားတာက…”ကနြျောတဈနှဈတဈခါ ဝါသနာတူညီကိုတှနေဲ့စဉျပျေါစိနျချေါပီးကစားပါတယျ…။
ဒီနှဈက စပွီး အလုပျကိစ်စတှကွေောငျ့ မထိုးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖွတျထားပမေဲ့လညျး အသဈပျေါလာသောမိုကျကွီး ဦးမငျးအုပျစိုး ကိုစိတျဝငျစားလို့ဒီကနစေိနျချေါလိုကျပါတယျခငျဗြား!
။MMA Rule နဲ့စိနျချေါတာဖွဈပွီးWeight နဲ့အသကျအရှယျအရ သရအေရှုံး အကွောပေးပါတယျ။ကနြျောကတော့ ကနြော့ကွိုးဝိုငျးထဲမှာပဲ 1 By 1 လူမိုကျလုပျတယျ။ခငျဗြားက လူမိုကျဆိုတော့ ကစားခငျြလို့ပါ။အကယျလို့လူကွီးမငျးဘကျက လကျခံရငျ
BSB (Burmes Street Boxing) ကို စာရငျးပေးသှငျးပွီးလာမဲ့ BSB Batch3မှာကနြျောနဲ့ကစားနိုငျပါတယျခငျဗြ!။အားကစားစိတျဓာတျဖွငျ့”လို့ရေးသားထားပါတယျ…။